ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ပါရမီလမ်းသွယ်တွင် ရောင်းရန်ရှိသည်။
Ad Number S-10192881
စမ္းေခ်ာင္းျပည္လမ္း မဟာၿမိဳင္မွတ္တုိင္အနီး 15×60ေပ႐ွိ5လႊ...
695 Lakh (Kyats)
Phone No. To Contact ေအးခ်မ္းေအာင္ အက်ိဳးေဆာင္
Ad Number S-10192776
ေအးခ်မ္းေအာင္ အက်ိဳးေဆာင္ Close
#မြောက်ဒဂုံ 32 ရပ်ကွက် ပေ၄၀၆၀ ဂရန်...
Phone No. To Contact Shwe Myanmar Property
Ad Number S-10192757
Shwe Myanmar Property Close
🙏🙏🙏 တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ရှိလုံးခြင်းတိုက်ရောင်းမည် ရွှေပြည်စိုးအိမ်ယာ အ...
Phone No. To Contact ရွှေရောင်မြေအိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင်
Ad Number S-10192557
ရွှေရောင်မြေအိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင် Close
လှိုင်မြို့နယ်​ ပါရမီ​ စိန်​ေဂဟာအနီးရှိ ေစျးသင့်​ပြင်ဆင်ပြီး​ MINI​ CONDO​...
1,480 Lakh (Kyats)
Phone No. To Contact Peace Land Real Estate
0943081500, 09773081500, 09795300860, 09259256367
Ad Number S-10192994
Peace Land Real Estate Close
သင်္ဃန်းကျွန်း လမ်းကျယ်မှာ တိုက်ခန်းကောရမယ်။
Lanmadaw | Yangon Region
Ad Number S-10192978
455 Lakh (Kyats)
Ad Number S-10192954
Phone No. To Contact လင်းရောင်နီ အိမ်ခြံမြေ
Ad Number S-10192947
လင်းရောင်နီ အိမ်ခြံမြေ Close
ရွှေတောင်ကြားရှိ အရောင်းများတင်ပေးလိုက်ပြီ အမျိုးတို့ရေ
19,000 Lakh (Kyats)
Phone No. To Contact Tain Yan Myint Mo Real Estate
Ad Number S-10192870
8,500 Lakh (Kyats)
Phone No. To Contact အင်ကြင်း အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်
Ad Number S-10192858
ဗဟန်းမြို့နယ်၊ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းသစ်တွင် ရောင်းရန်ရှိသည်။
53,200 Lakh (Kyats)
Ad Number S-10192843
Ad Number S-10192820